MUQDISHO(P-TIMES)- Ra’iisul Wasaaraha Somalia Xassan Cali Khayre ayaa booqday Isbitaalka Erdoğan oo lagu daweynayo dhaawacyada weerarkii lala eegtay Injineerrada Turkida ah iyo ciidamada amniga ee ku howlanaa dhismaha waddada Muqdisho & Afgooye.
Maamulka Isbitaalka ayaa Ra’iisul Wasaaraha uga warbixiyay Xaaladda Dhaawacyada oo qaarkood ka soo reynayey, kuwo kalena ay weli la tacaalayaan dhaqaatiirta isbitaalka.
Khayre ayaa mid mid u dul istaagay dhaawacyada, isagoo inta hadalka awoodi kartay ka wareysanayey xaaladooda caafimaad iyo dhibaatada soo gaartay.
Ra’iisul Wasaaraha Somalia Xassan Cali Khayre ayaa ILAAHAY uga baryey dhaawacyada inuu caafimaad taam ah siiyo, isagoo maamulka iyo dhaqaatiirta isbitaalka kula dardaarmay iney ku dedaalaan baxnaanintooda.
Ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhimatay 15 kale oo ay ku jiraan 6 ka mid ah injineerada Turkigana wey ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay degmada Afgooye maalmo ka hor kaasoo lala beegsaday shaqaalahan Turkida ee ka qeyb qaadanayey dhismaha wadada Muqdisho iyo Afgooye iyo ilaalo la socotay.